Calaamadaha: Korjoogteynta Sumcadda, Falanqaynta Dareenka, iyo Digniinta Baadhitaannada iyo Xusashooyinka Warbaahinta Bulshada | Martech Zone
In kasta oo inta badan tiknoolajiyada suuqgeynta loogu talagalay kormeerka sumcadda iyo falanqaynta dareenka ay si gaar ah diiradda u saaraan warbaahinta bulshada, Calaamadaha waa il dhammaystiran oo lagula soconayo wixii ama dhammaan tixraacyada magacaaga internetka.
Hanti kasta oo dijitaal ah oo ku xiran bartaada ama ku xusan magacaaga, sheygaaga, hashtag, ama magaca shaqaalaha… waa la ilaaliyaa oo lala socdaa. Iyo barnaamijka 'Brandmentions' wuxuu bixiyaa digniino, dabagal, iyo falanqeyn xagga dareenka ah. Calaamadaha awood u siiya ganacsiyada:
Dhis Xiriirro Ku Hawlan - Soo hel oo la macaamil macaamiishaada iyo saamileyaasha muhiimka ah ee ku jira niche kaas oo ku siin doona sumcad weyn iyo aragti weyn oo ku saabsan suuqaaga bartilmaameedka.
Hesho oo Hayso Macaamiisha - Baro danaha macaamiishaada aasaasna u samee badeecado daboolaya baahidooda iyo waxay doonayaan. BrandMentions waxay kuu sheegaysaa meesha aad ku dhiirrigelinayso alaabadaada oo aad ku heli karto macaamiil cusub.
Maamul Sumcadda Sumcadda - Adiga oo had iyo goor ka warqaba cidda kaa hadlaysa iyo waxaaga, waxaad helaysaa awood aad ku fahamto oo aad ku ilaaliso sumcaddaada suuqa aadka u tartamaya.
BrandMentions waxay noqotay aalad aan laga maarmin oo lagu cabiro guusha ololaheena suuqgeynta. Waxaan si adag u shaqeynaa si aan u dhisno wacyi-gelinta astaanteena internetka, mana jiro aalad kale oo aan tijaabinnay oo helaysa tilmaamo badan oo la xiriira sida BrandMentions. Waxaan aad ugu talinaynaa!
Mark Traphagen, Agaasimaha Sare ee Wacyigelinta Calaamadaha ee Stone Temple
Oo ay la socdaan bogagga internetka, Calaamadaha kormeeraya oo qabanaya sheegashada warbaahinta bulshada ee LinkedIn, Reddit, Facebook, Foursquare, Twitter, Pinterest, iyo Youtube.
Noocyada Calaamadeynta waxaa ka mid ah:
Shabakada iyo Kormeerka Bulshada - La soco wax kasta oo laga sheegayo shirkaddaada ama sheygaaga dhammaan dariiqyada muhiimka ah, ha noqoto shabakadda ama warbaahinta bulshada. Mentions Brand waxay kugula socodsiineysaa wax kasta oo muhiim u ah suuqaaga iyo wax kasta oo ku xiran shirkaddaada, iyagoo siinaya digniino waqtiga-tooska ah toos ugu soo diraya sanduuqaaga.
Basaas Tartame - Falanqaynta istiraatiijiyadda tartamayaashaada kaliya maahan ikhtiyaar. Waa qayb lagama maarmaan u ah istaraatiijiyadaada koritaanka. Inta badan ee aad ka ogaan karto ganacsigaaga iyo tartamayaashaada, wax badan ayaad baran kartaa, la qabsan kartaa, uguna dambayntii waad kobcin kartaa. Hada waxaad ku basaasaan kartaa tartamayaasha dhinacyo kala duwan waxaadna kaheli kartaa aragti cad halka uu tartanku dhab ahaan taagan yahay.
Ogeysiisyada waqtiga-dhabta ah - Raadi qofka ku xusay iyo meesha ay daqiiqaddaas ku qabteen. BrandMentions waxay ku siinaysaa ogeysiisyo waqtiga dhabta ah mar kasta oo aad hesho tixraacyo ama xiriiriyeyaal cusub. Waxaad hadda marin u heli kartaa dhammaan macluumaadka muhiimka ah ee la xiriira astaantaada guud ahaan shabakadaha iyo shabakadaha bulshada.
Waxaan la isticmaalayo Calaamadaha muddo laba bilood ah hadda oo ay ahayd mid fantastik ah. Awoodda in lagula socdo wax walba oo ku yaal hal madal waa mid aad u faa'iido badan. Macno ahaan waxay ku qaadatay dhowr daqiiqo in la sameeyo koontada oo lagu daro mowduucyo (iyo sidoo kale boggeyga) si aan u dhageysto.
E-maylka maalinlaha ah ee la helo waa waxa aan u baahanahay inaan dib u eego oo aan uga jawaabo mid kasta oo ka mid ah boggeyga oo ku xusan magac ahaan ama URL:
Tan iyo markii la bilaabay isticmaalka Calaamadaha, Waxaan
Aqoonsaday daabacaad kale oo xadaysa waxyaabaha ku jira. Wixii intaa ka dambeeyay way ka saareen walina dib uma daabicin.
Aqoonsaday suuqgeynta qaar saameynta kuwaas oo la wadaagayay waxyaabaha aan la socday ama aanan u muujin qadarinta.
Aqoonsaday qaar ka mid ah boggaga internetka ee kuwa kale ee hadla ay wareysteen ama ay wax ku qorayaan - iyagoo siinaya fursad aan ku helo soo-gaadhis dheeraad ah.
Anigu kama walwalayo falanqaynta dareenka maadaama daabicitaankeygu uusan qoreynin adeeg ama wax muran dhaliya. Si kastaba ha noqotee, haddii aad iibinayso wax soo saar ama adeeg, fahamka haddii dareenka ku saabsan astaantaadu ay tahay mid togan ama taban ayaa aad muhiim ugu ah guusha guud ee ganacsigaaga.
Bilaw Maxkamadeynta Calaamadaha Bilaashka ah
Tags: backlink kormeerkakormeerka sumaddacalaamadahakormeerka tartankasirdoonka tartankaFacebookLa socodka Facebookafar geesoodkormeer afar-geesood ahkormeerka hashtagkormeerka keywordLinkedInla xiriirintasheeg digniinPinterestkormeerka pinterestredditkormeerka redditmaaraynta sumcadilaalinta sumcaddadareenfalanqaynta dareenkawarbaahinta bulshadadigniinta baraha bulshadakormeerka warbaahinta bulshadaTwitterkormeerka twitteryoutubeLa socodka YouTube